ငှကျပြောသီး စားပွီးရငျ အခှံတှကေို မပဈလိုကျပါနဲ့ – Youth Bar
ငှကျပြောသီး စားပွီးရငျ အခှံတှကေို မပဈလိုကျပါနဲ့
စိုကျပြိုးရေး အတှကျ အရမျးအသုံးဝငျသောငှကျပြောခှံ “ငှကျပြောသီး စားပွီးရငျ အခှံတှကေို မပဈလိုကျပါနဲ့ အရမျးအသုံး ဝငျပါတယျ”
စိုကျပြိုးရေး အတှကျ ငှကျပြောသီး အသုံးဝငျ ပုံ သီးမှေး၊ ဖီးကွမျး၊ ရခိုငျ၊ ဝကျမလှတျ ပှဲထဲက ငှ ကျပြောသီး ပါမကနျြ သူ့အရသာ လေးနဲ့ သူကော ငျးလို့မှနျလို့ စားကွတယျ။ အိမျနီးနားခငျြး တှကေိုဝကွေတယျ။
အမယျ..ဦးရှငျကွီးတငျလို့ စားရတဲ့မုနျ့ဆမျးနဲ့ ငှကျပြော သီးလေးဆို ကောငျးလှနျးလို့ အသီးကပဲ စားကောငျးတာ မဟုတျပါဘူး။ သူ့အ ခှံ ကလညျး အသုံးဝငျတယျ ဆိုတာ သိစခေငျြပါတယျ။
စားနကွေတဲ့ ငှကျပြော သီးခှံကို စိုကျပြိုး ရေး လုပျငနျးတှမှော ဘယျလိုသုံး လို့ရနတေယျ ဆိုတဲ့ ကွောငျးကို တငျဆကျ ပေးမှာမို့ ငှကျပြော သီး ကြှေးပွီးရငျ အခှံကိုပွနျတောငျး ပွနျစုကွပါ။
မွဆှေေး အရညျလိုမြိုးပဲ ငှကျပြောသီး အခှံနဲ့ပွု လုပျထားတဲ့ ငှကျပြောခှံ ရညျဆိုတာကို ရှကျဖနျြးအားဆေးဖွဈ ပကျဖနျြးပေး လို့ရပါတယျ။ အပငျ တှကေို လောငျးပေးလို့ ရပါတယျ။
ဘယျလို လုပျရမလဲ ဆိုတာကတြော့ ရနေဲ့ (၂) ရကျ (၄၈ နာရီ) ထားပွီးရငျ အဲ့ငှကျပြောခှံ ရညျနဲ့ အပငျတှကေို လောငျးပေး လို့ရပါတယျ။ အာဟာရ တှကေို ပိုရလာအောငျ ငှကျပြောခှံတှကေ ကူညီပေးပါတယျ။
(၂) အပိုငျးစလေးတှေ မွကွေီးထဲ ထညျ့ပေးလို့ရတယျ။
စုထားတဲ့ ငှကျပြောခှံတှေ ရှိတယျဆိုရငျ ၅ ခကျြ ၆ ခကျြလောကျ ခုတျထဈပွီးတော့ စိုကျထားတဲ့ ခွံထဲ၊ ဥယြာဉျထဲကို တိုကျရိုကျ ထညျ့ပေးလို့ ရပါတယျ။ မွကွေီးတော့ ပွနျဖုံးပေးခဲ့ဖို့ လိုအပျပါတ ယျနျော။ တဈဖွညျးဖွညျး ဆှေးရငျးနဲ့ ဗီတာမငျနဲ့ သတ်တုဓာတျတှကေို ထောကျပံ့ ပေးနိုငျပါတယျ။
အခငျးထဲ တိုကျရိုကျ မထညျ့ခငျြဘူး ဆိုရငျ မွေ ဆှေးပုံ ပုံပွီးတော့ သုံးတဲ့နရောမှာ ငှကျပြောခှံကို ပါထညျ့ပွီးတော့ မွဆှေေး ပွုလုပျလို့ ရပါတယျနျော။ ငှကျပြောခှံနဲ့ပွု လုပျထားတဲ့ မွဆှေေးတှကေောငျးကောငျး ဆှေးပွီဆိုရငျ
ပြိုးဘောငျလုပျ တဲ့အခြိနျ မြိုးမှာ၊ အပငျတှေ ပနျးပှငျ့တဲ့ အခြိနျမြိုးတှမှော သုံးပေးလိုကျရငျ အပငျတှကေ အာ ဟာရတှေ အမြားကွီးရ လာမှာဖွဈပါ တယျနျော။
(၄) ငှကျပြောခှံ မှုနျ့မွသွေဇာ
ငှကျပြောခှံတှေ အမြားကွီး ရှိနတေယျဆို နရေော ငျအောကျမှာ အခွောကျခံ လိုကျပါ။ ကောငျးကော ငျးခွောကျသှားရငျ အမှုနျ့ကွိတျ ပွီးတော့ မွကွေီးထဲကို ထညျ့ပေးလို့ရပါတယျ။ သတိထားရမှာ တခကျြက အမွဈကို မထိအောငျ ထညျ့ပေးပါ။ အိုးတှမှောဆို ဖွူးထညျ့ လိုကျရုံပါပဲ။
မြိုးစေ့ စိုကျမယျဆို ငှကျပြောခှံကို တိုကျရိုကျသုံးပေးလို့ ရပါတယျ။ မွောငျးလေးတူး၊ ငှကျပြောခှံလေးတှခေငျး ပွီးတော့ အစလေ့ေး တှခြေ၊ မွပွေနျဖုံးခဲ့။ အမွဈလေးတှေ စထှကျတဲ့ အခြိနျ
အပငျလေးတှေ ကွီးလာတဲ့ အခြိနျမြိုး တှဆေိုသူ ကအာဟာရတှေ ကောငျးကောငျး ထောကျပံ့ပေးနိုငျတဲ့ မွသွေဇာကွီးဖွဈနဲ့ အသုံးတျောခံလို့ပေါ့။
ငှကျပြောခှံမှုနျ့ (၄) ဇှနျး၊ ကွကျဥခှံ (၃)ခုရဲ့ အမှုနျ့ရယျ၊ အကျပဆှနျ ဆားတဈဇှနျးကို ရသေနျ့ဘူးအ ရှယျ အစားထဲ ထညျ့ပွီး ရအေပွညျ့ ဖွညျ့ပွီး အ ပငျတှကေို ဖနျြးပေးလို့ ရပါပွီ။ ကယျလျစီယမျ၊ မဂ်ဂနီစီယမျနဲ့ ပိုတကျစီယမျကွှယျဝတဲ့ ရှကျဖနျြးမွသွေဇာပါပဲ။
(၇) အငျးဆကျတှေ ဖမျးမယျ။ ပနျးသီး ရှာလကာရညျထဲကို ငှကျပြောသီးခှံ လေးထညျ့ပွီး အငျးဆ ကျထောငျခွောကျ လုပျလို့ရပါတယျ။ ခွံထဲထညျ့ထားရငျ မှကျတှကေို အမြားကွီး လြော့ခနြိုငျပါတယျ။ ဘယျလိုလုပျ ရမလဲဆိုတော့ အဖုံးပါတဲ့
ကျောခှကျ လေးတှေ ထဲကို ငှကျပြောခှံနဲ့ ပနျးသီး ရှာလကာ ရညျထညျ့၊ ဘေးပတျပတျ လညျမှာ အ ပေါကျလေးတှေ ဖောကျထား။ အဖုံးလေး ပွနျပိ တျထား။ အဲ့လိုဆို မှကျမြိုးနှယျဝငျ အုပျစုတှကေ ထောငျ ခွောကျမှာမိပွီး အပငျတှကေို ကာကှယျနိုငျတာပေါ့။
ငှကျပြောခှံကို ရနေဲ့ အခဉျြဖောကျပွီး ပနျးပှငျ့တဲ့အပငျတှကေို ဖနျြးပေးရငျ ပနျးပှငျ့တှေ မြားကွီး ကွီးကွီးလှလှ ပှငျ့လာမှာပါ။ ဘယျလိုလုပျ ရမလဲ ဆိုရငျ ဖုံးလို့ရတဲ့ ပုလငျးထဲ ငှကျပြောခှံထညျ့၊ ပွီးတော့ ရမွေုပျနအောငျ ထညျ့ပွီး အဝတျကလေး နဲ့ ပိတျထား၊ တဈပတျလောကျ စောငျ့ရပါမယျ။
အမွုပျဖွူ လေးတှေ ထလာရငျ အဆငျပွတေယျ အမွုပျတှကေ မဲနမေယျ။ မှိုတှေ တကျလာတယျဆိုရငျတော့ လှငျ့ပဈလိုကျပါ။ အရညျကို လောငျးလို့ရပါတယျ။ အဖတျတှကေို ကွိတျပွီးတော့ မွေ ကွီးထဲ ထညျ့ပေးလို့ ရတယျ။ ကဲဘာလိုသေးလဲ?
စတျောဘယျရီတို့လို အကျဆဈ ကွိုကျတဲ့ အပငျတှေ အခဉျြဓာတျလေး ကွိုကျတဲ့ အပငျတှေ ကို ဖနျြးပေးရငျ အရှကျဖားဖားနဲ့ ပိုသနျစှမျး လာမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ငှကျပြောခှံကို ရနေဲ့စိမျ ပွီးတော့ ငှ ကျပြော ခှံရှာလကာရညျ လုပျရမှာပါ။ ရနေဲ့ စိမျ
တာတူတူပါပဲ။ တဈပတျကွာရငျ အဖတျတှေ ဆ ယျပွီး ရကေိုပဲ (၄) ပတျကနေ (၆) ပတျလောကျ ထားရမှာပါ။ ရှာလကာရညျလို အနံ့လေးထှကျတယျ။ တူလာပွီဆိုရငျ ရနေဲ့ ထပျရောပွီး အပငျလေးတှကေို လောငျးပေးပါ။
စိုက်ပျိုးရေး အတွက် အရမ်းအသုံးဝင်သောငှက်ပျောခွံ “ငှက်ပျောသီး စားပြီးရင် အခွံတွေကို မပစ်လိုက်ပါနဲ့ အရမ်းအသုံး ဝင်ပါတယ်”
စိုက်ပျိုးရေး အတွက် ငှက်ပျောသီး အသုံးဝင် ပုံ သီးမွှေး၊ ဖီးကြမ်း၊ ရခိုင်၊ ဝက်မလွတ် ပွဲထဲက ငှ က်ပျောသီး ပါမကျန် သူ့အရသာ လေးနဲ့ သူကော င်းလို့မွန်လို့ စားကြတယ်။ အိမ်နီးနားချင်း တွေကိုဝေကြတယ်။
အမယ်..ဦးရှင်ကြီးတင်လို့ စားရတဲ့မုန့်ဆမ်းနဲ့ ငှက်ပျော သီးလေးဆို ကောင်းလွန်းလို့ အသီးကပဲ စားကောင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့အ ခွံ ကလည်း အသုံးဝင်တယ် ဆိုတာ သိစေချင်ပါတယ်။
စားနေကြတဲ့ ငှက်ပျော သီးခွံကို စိုက်ပျိုး ရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ ဘယ်လိုသုံး လို့ရနေတယ် ဆိုတဲ့ ကြောင်းကို တင်ဆက် ပေးမှာမို့ ငှက်ပျော သီး ကျွေးပြီးရင် အခွံကိုပြန်တောင်း ပြန်စုကြပါ။
မြေဆွေး အရည်လိုမျိုးပဲ ငှက်ပျောသီး အခွံနဲ့ပြု လုပ်ထားတဲ့ ငှက်ပျောခွံ ရည်ဆိုတာကို ရွက်ဖျန်းအားဆေးဖြစ် ပက်ဖျန်းပေး လို့ရပါတယ်။ အပင် တွေကို လောင်းပေးလို့ ရပါတယ်။
ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ဆိုတာကျတော့ ရေနဲ့ (၂) ရက် (၄၈ နာရီ) ထားပြီးရင် အဲ့ငှက်ပျောခွံ ရည်နဲ့ အပင်တွေကို လောင်းပေး လို့ရပါတယ်။ အာဟာရ တွေကို ပိုရလာအောင် ငှက်ပျောခွံတွေက ကူညီပေးပါတယ်။
(၂) အပိုင်းစလေးတွေ မြေကြီးထဲ ထည့်ပေးလို့ရတယ်။
စုထားတဲ့ ငှက်ပျောခွံတွေ ရှိတယ်ဆိုရင် ၅ ချက် ၆ ချက်လောက် ခုတ်ထစ်ပြီးတော့ စိုက်ထားတဲ့ ခြံထဲ၊ ဥယျာဉ်ထဲကို တိုက်ရိုက် ထည့်ပေးလို့ ရပါတယ်။ မြေကြီးတော့ ပြန်ဖုံးပေးခဲ့ဖို့ လိုအပ်ပါတ ယ်နော်။ တစ်ဖြည်းဖြည်း ဆွေးရင်းနဲ့ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေကို ထောက်ပံ့ ပေးနိုင်ပါတယ်။
အခင်းထဲ တိုက်ရိုက် မထည့်ချင်ဘူး ဆိုရင် မြေ ဆွေးပုံ ပုံပြီးတော့ သုံးတဲ့နေရာမှာ ငှက်ပျောခွံကို ပါထည့်ပြီးတော့ မြေဆွေး ပြုလုပ်လို့ ရပါတယ်နော်။ ငှက်ပျောခွံနဲ့ပြု လုပ်ထားတဲ့ မြေဆွေးတွေကောင်းကောင်း ဆွေးပြီဆိုရင်
ပျိုးဘောင်လုပ် တဲ့အချိန် မျိုးမှာ၊ အပင်တွေ ပန်းပွင့်တဲ့ အချိန်မျိုးတွေမှာ သုံးပေးလိုက်ရင် အပင်တွေက အာ ဟာရတွေ အများကြီးရ လာမှာဖြစ်ပါ တယ်နော်။
(၄) ငှက်ပျောခွံ မှုန့်မြေသြဇာ
ငှက်ပျောခွံတွေ အများကြီး ရှိနေတယ်ဆို နေရော င်အောက်မှာ အခြောက်ခံ လိုက်ပါ။ ကောင်းကော င်းခြောက်သွားရင် အမှုန့်ကြိတ် ပြီးတော့ မြေကြီးထဲကို ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်။ သတိထားရမှာ တချက်က အမြစ်ကို မထိအောင် ထည့်ပေးပါ။ အိုးတွေမှာဆို ဖြူးထည့် လိုက်ရုံပါပဲ။
(၅) အစေ့စိုက်ရင် ထည့်ပေးလို့ရ
မျိုးစေ့ စိုက်မယ်ဆို ငှက်ပျောခွံကို တိုက်ရိုက်သုံးပေးလို့ ရပါတယ်။ မြောင်းလေးတူး၊ ငှက်ပျောခွံလေးတွေခင်း ပြီးတော့ အစေ့လေး တွေချ၊ မြေပြန်ဖုံးခဲ့။ အမြစ်လေးတွေ စထွက်တဲ့ အချိန်
အပင်လေးတွေ ကြီးလာတဲ့ အချိန်မျိုး တွေဆိုသူ ကအာဟာရတွေ ကောင်းကောင်း ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ မြေသြဇာကြီးဖြစ်နဲ့ အသုံးတော်ခံလို့ပေါ့။
ငှက်ပျောခွံမှုန့် (၄) ဇွန်း၊ ကြက်ဥခွံ (၃)ခုရဲ့ အမှုန့်ရယ်၊ အက်ပဆွန် ဆားတစ်ဇွန်းကို ရေသန့်ဘူးအ ရွယ် အစားထဲ ထည့်ပြီး ရေအပြည့် ဖြည့်ပြီး အ ပင်တွေကို ဖျန်းပေးလို့ ရပါပြီ။ ကယ်လ်စီယမ်၊ မဂ္ဂနီစီယမ်နဲ့ ပိုတက်စီယမ်ကြွယ်ဝတဲ့ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာပါပဲ။
(၇) အင်းဆက်တွေ ဖမ်းမယ်။ ပန်းသီး ရှာလကာရည်ထဲကို ငှက်ပျောသီးခွံ လေးထည့်ပြီး အင်းဆ က်ထောင်ခြောက် လုပ်လို့ရပါတယ်။ ခြံထဲထည့်ထားရင် မှက်တွေကို အများကြီး လျော့ချနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ် ရမလဲဆိုတော့ အဖုံးပါတဲ့
ကော်ခွက် လေးတွေ ထဲကို ငှက်ပျောခွံနဲ့ ပန်းသီး ရှာလကာ ရည်ထည့်၊ ဘေးပတ်ပတ် လည်မှာ အ ပေါက်လေးတွေ ဖောက်ထား။ အဖုံးလေး ပြန်ပိ တ်ထား။ အဲ့လိုဆို မှက်မျိုးနွယ်ဝင် အုပ်စုတွေက ထောင် ခြောက်မှာမိပြီး အပင်တွေကို ကာကွယ်နိုင်တာပေါ့။
ငှက်ပျောခွံကို ရေနဲ့ အချဉ်ဖောက်ပြီး ပန်းပွင့်တဲ့အပင်တွေကို ဖျန်းပေးရင် ပန်းပွင့်တွေ များကြီး ကြီးကြီးလှလှ ပွင့်လာမှာပါ။ ဘယ်လိုလုပ် ရမလဲ ဆိုရင် ဖုံးလို့ရတဲ့ ပုလင်းထဲ ငှက်ပျောခွံထည့်၊ ပြီးတော့ ရေမြုပ်နေအာင် ထည့်ပြီး အဝတ်ကလေး နဲ့ ပိတ်ထား၊ တစ်ပတ်လောက် စောင့်ရပါမယ်။
အမြုပ်ဖြူ လေးတွေ ထလာရင် အဆင်ပြေတယ် အမြုပ်တွေက မဲနေမယ်။ မှိုတွေ တက်လာတယ်ဆိုရင်တော့ လွှင့်ပစ်လိုက်ပါ။ အရည်ကို လောင်းလို့ရပါတယ်။ အဖတ်တွေကို ကြိတ်ပြီးတော့ မြေ ကြီးထဲ ထည့်ပေးလို့ ရတယ်။ ကဲဘာလိုသေးလဲ?
စတော်ဘယ်ရီတို့လို အက်ဆစ် ကြိုက်တဲ့ အပင်တွေ အချဉ်ဓာတ်လေး ကြိုက်တဲ့ အပင်တွေ ကို ဖျန်းပေးရင် အရွက်ဖားဖားနဲ့ ပိုသန်စွမ်း လာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ငှက်ပျောခွံကို ရေနဲ့စိမ် ပြီးတော့ ငှ က်ပျော ခွံရှာလကာရည် လုပ်ရမှာပါ။ ရေနဲ့ စိမ်
တာတူတူပါပဲ။ တစ်ပတ်ကြာရင် အဖတ်တွေ ဆ ယ်ပြီး ရေကိုပဲ (၄) ပတ်ကနေ (၆) ပတ်လောက် ထားရမှာပါ။ ရှာလကာရည်လို အနံ့လေးထွက်တယ်။ တူလာပြီဆိုရင် ရေနဲ့ ထပ်ရောပြီး အပင်လေးတွေကို လောင်းပေးပါ။